अनुगमन समितिको राय विपरीत स्वास्थ्य सचिवले दिइन् काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति – Health Post Nepal
२०७५ असोज १७ गते १३:२३
स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत पूर्वाधार नै पूरा नगरेको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई तीन सय बेड सञ्चालन अनुमति दिने दिएकी छिन् ।
अनुगमन समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भवन सम्पन्नता प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै तत्काल सञ्चालन अनुमति दिन नमिल्ने सुझाब दिएको थियो । तर स्वास्थ्य सचिव डा.चौधरीले नपुगेका मापदण्ड र शर्तहरु पछि पूरा गर्नेगरी अनुमति दिने निर्णय गरेकी छन् ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा औषधि व्यवस्थापक संगीता शाहले २ सय शैया अनुमति दिनका लागि पनि थप अनुगमन गर्नुपर्ने राय लेखेकी थिइन् । अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले साहको रायलाई हेरेर पुनः अनुगमनगरी अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने राय लेखेका थिए । ती राय र टिप्पणीलाई वेवास्ता गर्दै चौधरीले ३ सय शैयाकै लागि अनुमति दिएकी हुन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीले नपुगेका मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर पनि २ सय वेडभन्दा बढी अनुमति दिनै नसकिने राय राखेपनि चौधरी भने ३ सय शैयाकै पक्षमा उभिएकी थिइन् । तीन सय शैया नभएसम्म मेडिकल कलेज संचालन अनुमति नपाउने भएकोले आर्थिक प्रलोभनमा परेर डा.चौधरीले मापदण्डै नपुगेको अस्पताललाई स्वीकृति दिएकी छन् ।
अस्पतालको निवेदनपछि निरीक्षणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजकत्वको टोलीले समेत थुप्रै पूर्वाधार अपुग भएको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई पन्छाएर सञ्चालन अनुमति दिएकी हुन् ।
अस्पतालका प्रमुख सञ्चालक नेकपाका नेता बसुरुद्दिन अन्सारी हुन् । उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट गत स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए । हाउजिङका लागि बनेको भवनमा अस्पताल सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । अर्कोतिर पर्याप्त खुला ठाउँ र भवन विभागबाट भूकम्पप्रतिरोधी प्रमाणपत्रसमेत छैन ।
अस्पतालले पहिलोपटक १६ साउन ०६८ मा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०६१ बमोजिम सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, निरीक्षण टोलीले पूर्वाधार नपुगेको रिपोर्ट दिएपछि अस्पतालले नियमविपरीत शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएको थियो । पछि, सम्बन्धनका क्रममा अस्पतालले २८ वैशाख ०७१, सोही वर्ष २ मंसिर र पछिल्लोपटक २२ वैशाख ०७५ मा फेरि सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । सो आधारमा २४ असारमा मन्त्रालयले डा. प्याकुरेल संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।
अनुमतिका लागि केही समयअघि तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट उठेको फाइल पछिल्लोपटक अगाडि बढेको थियो । ‘पूर्वाधार नपुगेको भनेर रोकिएको फाइल सचिवकै दबाबमा अगाडि बढाइएको थियो ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालकै पालामा अगाडि बढेको फाइल तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै (हाल गुणस्तर मापन, नियमन महाशाखा)मा लामो समय रोकिएको थियो । ठूलो दबाबपछि महाशाखाले अहिले घुमाएर सकारात्मक राय दिएको छ । यसअघि मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाका प्रमुख मोहम्मद दाउद काठमाडौं नेसनल अस्पतालले ३ सय शय्याका अनुमति दिन नमिल्ने भन्दै फाइल रोकेका थिए । केहीअघि उनको सरुवा गरेर चौधरीले फाइल अगाडी बढाउन लगाएकी थिइन् ।
One thought on “अनुगमन समितिको राय विपरीत स्वास्थ्य सचिवले दिइन् काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति”
Quality assessment and regulation division says:
This is completely wrong news and violation of code of conduct